"Ny amin’ izany dia manana teny maro izahay sady sarotra ambara, satria lalodalovana ny sofinareo." Hebreo 5:11
"Fa izay maniry tsilo sy songosongo kosa dia lavina sady akaikin’ ny ozona, ary ny hiafarany dia ny hodorana." Hebreo 6:8
Ny finoana dia tsy mijanona amin’ny dingana iray. Velona sy mitombo ary miasa izany. Ao amin’ny sekolin’Andriamanitra, dia antsoiny ho amin’ny fitomboana ny kristianina tsirairay, ho amin’ny fihavaozana mba hahatratra ny fahamatorana feno. Voarain’ireo Jiosy hivantanan’ny taratasy ve izany fahamarinana izany?
Zaza fa tsy lehibe (5:11-4:3). Omen’ny mpanoratra tsiny ny tsi-fahamatoran’izy ireo. Na efa ela tao amin’ny finoana aza (11-12), dia tsy mahazo izay ambara (6-11, jereo 1 Korintianina 3:1-2). Mbola mihitsoka eo amin’ny “abidiam-pianarana” ny amin’i Kristy izy ireo. Inona avy izany? (1-2) Ireo dia fahamarinana fototra izay tokony ho fantatra tsara mba hianarana ny hafa izay sarotra kokoa, nefa mendrika “izay efa lehibe” (5:14). Ireo efa lehibe amin’ny finoana, zatra mampihatra ny Tenin’Andriamanitra, no afaka manavaka ny tsara amin’ny ratsy. Ary ianao aiza ho aiza?
Fampitandremana (4-8). Mikasika ny fialàna amin’ny finoana izany! Maro ny olona amin’izao fotoana izao, mety ho mpitarika aza, no mihemotra noho ny antony samihafa (fananana sy harena, voninahitra sy laza. . . ). Efa nanandrana ny Tenin’Andriamanitra izy ireo, nefa mandà izany amin’ny alalan’ny fiainana sy/na ny teny: nanandrana ny finoana izy (4-5) saingy tsy nanolo-tena. Tsy voa ilaina no nentin’ny Teny ho azy ireo fa tsilo (7-8). Sao dia nifampikasoka tamin’ny finoana fotsiny ianao nefa tsy tonga amin’ny famonjena? Sao dia fombam-pivavahana fotsiny no iainanao fa tsy famonjena ny fanahinao?
Fampaherezana: Tena loza mananon-tanona ny tsy fitondrana voa eo amin’ny fiainana kristianina! Sedrao amin’ny Kolosianina 3:2-10 ny fahamatoranao!